Uwe Schmidt: Ejiji Anya
Akpụkpọ ụkwụ ọrụ
Anya ụmụ nwanyị
Osisi ugogbe anya
Nchịkọta da Nwoke
Fmụ nwanyị Fall Collection
Blọgụ Trendy Insight
Mbupu n'efu gaa ebe nile na USA
ụdị ụdị Apụta kasị mma n'ire Alphabetically, AZ Alphabetically, ZA Price, ala elu Price, elu ala Ụbọchị, agadi ọhụrụ Ụbọchị, ọhụrụ ka ochie
Zebrawood Ugogbe anya maka anwụ, Kpakpando na Ogwe na osisi, Gbasara,
Real Sandalwood ugogbe anya maka anwụ, Ice Blue Polarized Anya, Aka
Ugogbe anya maka anwụ nke Zebrawood nwere anya ure na-acha anụnụ anụnụ
Red Bamboo Mbe N'ogogbe anya ugogbe anya na Wood Case, Mgbasa,
Black Wood na Ugogbe anya maka anwụ, G15 Polarized Anya na achara Case
Zebrawood Okpokoro Okpokoro Okpokoro Okpokoro
Ejiri ukpa ukpa osisi osisi ugogbe anya nke eji eme achara,
Midnight Black Bamboo Club Ugogbe anya maka anwụ na Case
Miri Mkpụrụ Mịrị Mịrị Mịrị Achara Igwe Igwe Anya
Anwụ na-acha Ugogbe anya maka anwụ, Black achara na Case Case
Cherry Wood na ugogbe anya maka anwụ Acetate
Mkpụrụ osisi Mint Green
Jase New York Royce Ugogbe anya maka anwụ na Havana
Cherry Wood na ugogbe ala eji eji eji ugogbe anya
Skateboard Multi-Layer Club Ugogbe anya maka anwụ, Anya mwepu ojii
Skateboard Multi-Layer-Club Ugogbe anya maka anwụ, mgbanaka agbatị, ya na ikpe
Anyanwụ Anya Anya Anya nke Ejiri Black Bamboo na Ikpe
Granite Coloured Frame, Achara Ugogbe anya maka anwụ, Polarized with Wood Case
Ugogbe anya maka anwụ nke Zebrawood nwere oghere uhie
Red Stripe Abụọ Ugogbe anya abụọ, kanyere na nkewa
Ugogbe anya anwụ nke osisi Rosewood nke eji osisi eji arụ ọrụ, nke etinyere aka,
Oak Akara Okpokolo agba, Achara ugogbe anya maka anwụ, Anya m acha anụnụ anụnụ
Ịgachi price $ 87.98 Zọpụta $ -87.98
Mbupu gbakọọ na ndenye ọpụpụ.
Premium Zebrawood Stars na Stripes Ugogbe anya maka anwụ, ekekọrịta, HandCrafted, UV 400 Nchedo, Anti-Reflective Cat 3 Anya m, Artisan kanye, Eco-Enyi na Enyi.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, akpa achara, obere obere obere microfiber, akwa nhicha Microfiber, ugogbe ugogbe ugogbe ugo na kaadị nnwale polarization!
Sizing: Frame Width: 5.75 inches - Fraim Elu: 1.9 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.6 sentimita.
Nke nwere ikike Anya m nwere ike iwepu ma ọ bụ belata ncha ncha. Emebere anya m anya iji nye 100% UVA na UVB nchekwa ọbụlagodi ọnọdụ ọkụ siri ike. Enweghi nchebe na-enweghị atụ, nghọta miri emi belatara, echiche gbagọrọ agbagọ na nghọta agba na-eme, na ụfọdụ, ị nwere ike kpuo ìsì nwa oge. Polarization bara uru maka ọtụtụ ọrụ a na-eme n'èzí gụnyere ịnya ụgbọ ala, egwuregwu dị egwu, egwuregwu mmiri, na ịkụ azụ. Uru nke ugogbe anya maka anwụ na-enweghị njedebe ma nwee ike ịchekwa ọhụụ gị!
Ejiri aka: A na-eji ugogbe anya maka anwụ ugogbe ọhụụ nke Engleberts mee ya n'otu n'otu. N'ihi ọdịiche dị na ọka osisi, ọ dịghị mmadụ abụọ ga-adị nhata. Kedu otu ị pụrụ iche.
UV 400 Echebe: Engleberts Ugogbe anya maka anwụ nwere oghere echekwara UV 400. Ugogbe anya maka anwụ nke UV 400 nwere ike igbochi ụzarị ọkụ dị ka 400 nanometers. Nke a pụtara na ebe ọ bụla site na 99 ruo 100 pasent nke radieshon na-emerụ ahụ nke anyanwụ na-ewepụ anya, nke nwere ike ime nnukwu mgbanwe na nchedo anya.
Mmiri na-adabere: Na-enye ọtụtụ ngagharị na nkasi obi iji nweta isi dị iche iche, na-enwe ike iguzogide ojiji kwa ụbọchị.
9 Layer Cat 3 Anya m: Anya m Cat 3 bụ elele kachasị elu kachasị elu ị nwere ike iyi ma ka na-akwọ ụgbọala.
Ntughari uche: Meziwanye ọhụụ, belata nhụsianya anya ma mee ka ugogbe anya gị mara mma.
Nkecha: Vdị Vintage Vintage mara mma nke dị mma na onye ọ bụla mana ị maara nke ahụ. You're na-aga Inata Otuto!
fechaa: Ugogbe ugogbe elu osisi gi di iche iche di elu karie plastic.
Egwuregwu na-ekwu okwu: Gaa Green site na ịzere ugogbe anya maka anwụ. Engleberts Premium Slasslasses na-adịgide. Bamboos bụ ụfọdụ n'ime osisi na-eto ngwa ngwa n'ụwa na ụfọdụ ụdị na-eto eto uto ihe ruru 3 ụkwụ n'ime awa 24. Achara bụ ahịhịa na-eto ngwa ngwa, ọ naghị achọ fatịlaịza ma na-agbanwe onwe ya site na mgbọrọgwụ ya, yabụ na ọ dịghị mkpa ka a kụọ ya.
Ezi Omume: Ga-enweta otito na ugogbe anwụ anwụ Engleberts, gbaa mbọ hụ na ndị mere otito gị mara ebe ị si nweta ha. Ọganihu! Emezuru ezi ọrụ nke ụbọchị ahụ.
100% Akpadoro Afọ Ojuju: - Anyị nwere obi ike na ngwaahịa ngwa ngwa anyị. Ọ bụrụ n’ịchọghị nke gị, weghachi ha maka nkwụghachi zuru ezu.
At Ndị Nlekọta anyị na-etinye ntakịrị n’ime ugogbe anya anyị karịa ndị ọzọ. Inwe onye ọ bụla ejiri aka mee, jide n'aka na ugogbe anya anyị niile na-arụ ọrụ, UV 400 echedoro, nwere oghere na-eche echiche echebara ma dịkwa fechaa. Ga-ahụkwa iko anyị ga-abụ nke ezigbo osisi nkịtị, Eco-friendly, adigide, omenka kanye na nkecha. Anyị na-eji igwe anaghị agba nchara spring hinges, Cat 3 lenses na mgbe a na-ekwu ya niile ma mee ya ị ga-enweta nnukwu uru na ugogbe anya maka anwụ dị iche iche dịka ị dị.
Anyị ga-ebuputa ụzọ ọ bụla nwere obere microfiber obere akpa maka obere, akwa microfiber na-ehicha akwa iji mee ka ị na-ele anya dapper, Free sunglass straps ka ị ghara idafu akụ mba ndị a. Heck, anyị ga-atụba kaadị nnwale Free Polarization ka ị wee mara na ị na-enweta ezigbo ahịa. Obere ihe ndi ozo etinyere na nke obula nke na ekewa gi na gi na ndi ozo
Anyị emebeghị, Di na ụzọ gị gụnyekwara a echebe achara Case. Ọ dịghị ụzọ dị mma iji chebe ugogbe anya maka anwụ gị karịa nke a. Ọ na-ekpuchi ísì ụtọ nke ụwa dị n'ime. Ga-obi ụtọ ụtọ nke-esi isi nke ụwa. Na-ewetara ndị niile nwere ya kama. (Wardọ aka na ntị: ellingnụ isi n'ime eriri achara gị nwere ike bụrụ agwa akpụ).
Kewapụ Onwe Gị na Engleberts adịchaghị Osisi ugogbe anya!
Ịgachi price $ 109.98 Zọpụta $ -109.98
Engleberts 100% Real Sandalwood Slasslass, Ice Blue Polarized Lenses, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lenses, Artisan Edere, Eco-Enyi na Enyi.
Kpọmkwem Zero Ndị mmadụ ga-apụ apụ, ha ga - apụ apụ na ugogbe anya anwụ sandalwood ndị a!
Gụnyere: Ugogbe anya anwụ Sandalwood, obere obere obere Microfiber, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe anya anwụ na kaadị nnwale efu.
Sizing: Frame Width: 5.5 inches - Fraim Elu: 1.5 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.5 sentimita.
atụmatụ: Mgbapu ekewapụrụ Anya m nwere ike iwepu ma ọ bụ belata ncha ncha. Emebere anya m anya iji nye 100% UVA na UVB nchekwa ọbụlagodi ọnọdụ ọkụ siri ike. Uru nke ugogbe anya maka anwụ na-enweghị njedebe ma nwee ike ịchekwa ọhụụ gị!
Mmiri na-adabere: Igwe anaghị agba nchara hinges na-enye a ukwuu nso nke ngagharị na nkasi obi ịnabata dị iche iche sized isi, na-emekwa ka gị ugogbe anya maka anwụ ike idi kwa ụbọchị ojiji.
Nkecha: Engleberts Osisi ugogbe anya maka anwụ nwere kpochapụwo Devid agụghị ndị gbara ịke nke ọma na mma na-achọ na onye ọ bụla, ma ị maraworị na. You're na-aga Inata Otuto!
Egwuregwu na-ekwu okwu: Gaa Green site na ịzere ugogbe anya maka anwụ. Engleberts Premium Slasslasses na-adịgide. Bamboos bụ ụfọdụ n'ime osisi na-eto ngwa ngwa n'ụwa na ụfọdụ ụdị na-eto eto uto ihe ruru 3 ụkwụ n'ime awa 24. Achara anaghị achọ fatịlaịza ma na-agbanwe onwe ya site na mgbọrọgwụ ya, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa ka a kụọ ya ọzọ.
Uru: Otu ụzọ Engleberts na-abịa obere akpa microfiber dị nro, akwa microfiber nhicha na eriri ugogbe anya anwụ.
Anyị ga-ebuputa ụzọ ọ bụla nwere obere microfiber obere akpa maka obere, akwa microfiber na-ehicha akwa iji mee ka ị na-ele anya dapper, Free sunglass straps ka ị ghara idafu akụ mba ndị a. Heck, anyị ga-atụba kaadị nnwale Free Polarization ka ị wee mara na ị na-enweta ezigbo ahịa. Obere ihe ndi ozo etinyere na nke obula nke na ekewa gi na gi na ndi ozo.
Ugogbe anya maka anwụ nke Zebrawood nwere anya ube na-acha anụnụ anụnụ na Akụrụ Osisi, Ejiri aka, UV 400 Nchedo, Ihe Nlekọta Na-eche Uche nke 3 XNUMX, Eco-Friendly.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, akpa osisi, obere obere obere microfiber, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe ugo na kaadị nnwale efu.
Sizing Obosara Obosara: 5.75 sentimita asatọ - Oghere Elu: 1.9 sentimita asatọ - Temple Ogologo: 5.75 sentimita asatọ.
Ihe Nleba Anya Anya m nwere ike iwepu ma ọ bụ belata ncha ncha. Emebere anya m anya iji nye 100% UVA na UVB nchekwa ọbụlagodi ọnọdụ ọkụ siri ike. Uru nke ugogbe anya maka anwụ na-enweghị njedebe ma nwee ike ịchekwa ọhụụ gị!
At Ndị Nlekọta anyị na-etinye ntakịrị n’ime ugogbe anya anyị karịa ndị ọzọ. Inwe onye ọ bụla ejiri aka mee, jide n'aka na ugogbe anya anyị niile na-arụ ọrụ, UV 400 echekwara, nwere anya m na-eche echiche ma dị fechaa. Ga-ahụkwa iko anyị ga-abụ nke ezigbo osisi nkịtị, Eco-friendly, adigide, omenka kanye na nkecha. Anyị na-eji igwe anaghị agba nchara spring hinges, Cat 3 lens na mgbe a na-ekwu ya niile ma mee ya ị ga-enweta nnukwu uru na ugogbe anya maka anwụ dị iche iche dịka ị dị.
Ịgachi price $ 82.48 Zọpụta $ -82.48
Red Bamboo Tortoise Fraised Slasslasses, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Reflex Lens 3, Artisan Edere, Eco-Enyi na Enyi. Edere Artisan
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, akpa achara, obere obere microfiber, akwa nhicha Microfiber, ugogbe ugogbe ugo na kaadị nnwale.
Sizing Obosara Obosara: 5.9 sentimita asatọ - Oghere Elu: 1.9 sentimita asatọ - Temple Ogologo: 5.9 sentimita asatọ.
atụmatụ: Nke nwere ikike Anya m nwere ike iwepu ma ọ bụ belata ncha ncha. Emebere anya m anya iji nye 100% UVA na UVB nchekwa ọbụlagodi ọnọdụ ọkụ siri ike. Enweghi nchebe na-enweghị atụ, nghọta miri emi belatara, echiche gbagọrọ agbagọ na nghọta agba na-eme, na ụfọdụ, ị nwere ike kpuo ìsì nwa oge. Polarization bara uru maka ọtụtụ ọrụ a na-eme n'èzí gụnyere ịnya ụgbọ ala, egwuregwu dị egwu, egwuregwu mmiri, na ịkụ azụ. Uru nke ugogbe anya maka anwụ na-enweghị njedebe ma nwee ike ịchekwa ọhụụ gị!
Ịgachi price $ 67.50 Zọpụta $ -67.50
Ndị Nlekọta Premium Black Wood na Ugogbe anya maka anwụ, na achara Case. G15 Anya Mgbapu, Aka Aka, UV 400 Nchedo, Ihe Nleta Na-eche Uche 3, Eco-Friendly.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, obere microfiber obere akpa, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe anya nke anwụ, kaadị ule na-akwụ ụgwọ n'efu na mbupu n'efu!
Sizing: Frame Width: 5.67 inches - Fraim Elu: 2.12 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.75 sentimita.
Mgbapu ekewapụrụ Anya m nwere ike iwepu ma ọ bụ belata ncha ncha. Emebere anya m anya iji nye 100% UVA na UVB nchekwa ọbụlagodi ọnọdụ ọkụ siri ike. Uru nke ugogbe anya maka anwụ na-enweghị njedebe ma nwee ike ịchekwa ọhụụ gị!
At Ndị Nlekọta anyị na-etinye ntakịrị n’ime ugogbe anya anyị karịa ndị ọzọ. Inwe onye ọ bụla ejiri aka mee, jide n'aka na ugogbe anya anyị niile na-arụ ọrụ, UV 400 echekwara, nwere anya m na-eche echiche ma dị fechaa. Ga-ahụkwa iko anyị ga-abụ nke ezigbo osisi nkịtị, Eco-friendly, adigide, omenka kanye na nkecha. Anyị na-eji igwe anaghị agba nchara spring hinges, Cat 3 lenses na mgbe a na-ekwu ya niile ma mee ya ị ga-enweta nnukwu uru na ugogbe anya maka anwụ dị iche iche dịka ị dị.
Anyị emebeghị, Ndị otu gị gụnyekwara Mkpuchido achara na-echebe. Ọ dịghị ụzọ dị mma iji chebe ugogbe anya maka anwụ gị karịa nke a. Ọ na-ekpuchi ísì ụtọ nke ụwa dị n'ime. Ga-obi ụtọ ụtọ nke-esi isi nke ụwa. Na-ewetara ndị niile nwere ya kama. (Wardọ aka na ntị: ellingnụ isi n'ime eriri achara gị nwere ike bụrụ agwa akpụ).
Ịgachi price $ 98.98 Zọpụta $ -98.98
Ọ bụrụ na ị bụ osisi aficionado, ndị a ka emere gị.
Engleberts 100% Zebrawood Fraịị Igwe Igwe Igwe zuru oke, Anya Mgbaze, Ejiri Aka, UV 400 Nchedo, Ntugharị Mgbochi, Anya CAT 3 na Eco-Enyi na Enyi.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, obere microfiber obere akpa, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe ugo na kaadị nnwale efu.
Sizing: Frame Width: 5.75 inches - Fraim Elu: 1.8 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.7 sentimita.
Engleberts Premium Walnut Wood Club Style Slasslass, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lens, Artisan Edere, Eco-Enyi na Enyi.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, akpa achara, obere obere microfiber, akwa nhicha Microfiber dị elu, ugogbe ugogbe ugo na kaadị nnwale.
Sizing: Frame Width: 5.25 inches - Fraim Elu: 1.75 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.5 sentimita.
Cheedị echiche nka NASA, TESLA, MIT na BMW ka etinyere naanị ugogbe anya maka anwụ, wee mụbaa nke ahụ site na 5 - ị ga-enwe Englberts Premium Slasslasses.
Ugogbe anya anwụ Black Bamboo Club Slasslasses with case, Polarized, HandCrafted, UV 400 Nchedo, Ngosiputa Ngosiputa, Ihe Nlekọta 3 Cat, Edebere Artisan, Eco-Friendly.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, akpa achara, obere obere obere microfiber, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe ugo na kaadị nnwale na-enweghị atụ!
Ịgachi price $ 85.23 Zọpụta $ -85.23
Miri Miri Miri Miri Igwe Mbara Igwe Achara Na-acha Mgba, Polarized, HandCrafted, UV 400 Nchedo, Ntugharị Na-eche Ntugharị 3 XNUMX, Ọrụ Aka Ede, Eco-Enyi na Enyi.
Sizing: Frame Width: 5.9 inches - Fraim Elu: 1.9 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.9 sentimita.
Anyị ga-ebuputa ụzọ ọ bụla nwere obere microfiber obere akpa maka obere, akwa microfiber na-ehicha akwa iji mee ka ị na-ele anya dapper, Free sunglass straps ka ị ghara idafu akụ mba ndị a. Heck, anyị ga-atụba kaadị nnwale Free Polarization ka ị wee mara na ị na-enweta ezigbo ahịa. Obere mgbakwunye niile dị na ịzụta ọ bụla na-ekewa ma gị na anyị na ndị ọzọ,
Anyị emebeghị, Di na ụzọ gị gụnyekwara a echebe achara Case. Ọ dịghị ụzọ dị mma iji chebe ugogbe anya maka anwụ gị karịa nke a. Ọ na-ekpuchi ísì ụtọ nke ụwa dị n'ime. Ga-obi ụtọ ụtọ nke-esi isi nke ụwa. Na-ewetara ndị niile nwere ya kama ọma.
Ịgachi price $ 90.73 Zọpụta $ -90.73
Ugogbe anya anwụ Black Bamboo Club ugogbe anya na ikpe, Polarized Sunset Lenses, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective, Cat 3 Lenses, Artisan Enyi, Eco-Friendly.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, akpa achara, obere obere microfiber, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe ugogbe, kaadị nnwale na-enweghị atụ!
Sizing: Frame Width: 5.5 inches - Fraim Elu: 1.75 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.5 sentimita.
Ịgachi price $ 76.98 Zọpụta $ -76.98
Cherry Wood na Acetate Polarized Ugogbe anya, HandCrafted, UV 400 Nchedo, Anti-Reflective Cat 3 Anya m, Eco-Enyi na Enyi.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, obere microfiber obere akpa, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe anya anwụ na kaadị nnwale efu!
Acetate bụ plastic na-enweghị anataghi nke sitere na osisi. N’adịghị ka plastik ndị nwere mmanụ ala, plastik acetate dị mma na gburugburu ebe obibi ebe ọ bụ na e sitere na ihe okike ndị na-emegharị emegharị nke na-emebi oge.
Ejiri aka: A na-eji ugogbe anya maka anwụ ugogbe ọhụụ nke Engleberts mee ya n'otu n'otu. N'ihi ọdịiche dị na ọka osisi, ọ dịghị mmadụ abụọ ga-adị nhata. Kedu ka ị si dị iche.
Jasi New York Royce ugogbe anya maka anwụ na-egosipụta akụkụ nwere akụkụ akụkụ ya na ụlọ nsọ ọla nchara eji eme ọfụma ma na-egosipụta ìhè. Ezubere ha iji toomie usoro nka eji mepụta mmetụta ụda site na ịdekọ ahịrị yiri nke a. Tinye ndị a na ihu gị na ị na-ekwe nkwa na-enwu na-enwu gbaa.
(Lens) / (BRIDGE) / (Ọnọdụ)
Ịgachi price $ 94.85 Zọpụta $ -94.85
Cherry Wood na Acetate Polarized Ugogbe anya maka anwụ na achara Case. Emere aka, UV 400 Nchedo, Ihe Nlekọta Na-eche Uche 3 XNUMX, Eco-Friendly.
Ịgachi price $ 115.48 Zọpụta $ -115.48
100% Skateboard Wood Multi-Layer Slasslasses, Black Polarized Lenses, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective na CAT 3 Anya m, Artisan kanye, Eco-Enyi na Enyi.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, obere microfiber obere akpa, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe ugogbe free, kaadị nnwale eserese n'efu na Mbupu n'efu!
Sizing: Frame Width: 5.75 inches - Fraim Elu: 1.75 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.62 sentimita.
Tints gị na-aga ịja mma!
Ịgachi price $ 134.73 Zọpụta $ -134.73
100% Skateboard Multi-Layer Club Slasslasses, Black Polarized Lenses, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective na CAT 3 Anya m, Artisan kanye, Eco-Enyi na Enyi.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, akpa achara, obere obere obere microfiber, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe ugo na kaadị nnwale efu.
Ịgachi price $ 101.73 Zọpụta $ -101.73
Echiche ndị a na ugogbe anya maka anwụ dị ka nke ị na-ele anya site na nge anya awọ, agba agba gị agaghị achagharị site na oghere uhie / oroma.
Anya Anyanwụ Anyanwụ Na-eji Okpokoro Egwu Egwu zuru ezu na Ikpe, Polarized, HandCrafted, UV 400 Nchedo, Anti-Reflective Cat 3 Anya m, Eco-Enyi na Enyi.
Ọ D so MMA ka onye na - ese anyị enweghị ụbọchị ya kachasị mma. N'ime ogwe aka ugogbe anya anwụ ndị a na-ede Polaried. Mmehie anyị bụ uru gị. Ndị a ugogbe anya maka anwụ na-akara iji gosipụta njehie na ọ bụ gị ohere akara a ụtọ ụzọ nke shades na a oké ego.
Granite acha gosikwara ugogbe anya maka anwụ, esemokwu, Handcrafted, UV 400 Nchedo, Anti-Reflective Cat 3 Anya m, Eco-Enyi na Enyi.
Sizing: Frame Width: 5.4 inches - Fraim Elu: 1.9 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.5 sentimita.
Ịgachi price $ 70.40 Zọpụta $ -70.40
Ugogbe anya maka anwụ nke Zebrawood nwere anya ugogbe acha anụnụ anụnụ, nke ejiri aka rụọ, UV 400 Nchedo, Ihe ngosi 3 na-eme ka a na-echegharị echekwa, Eco-Friendly.
Ndị na-arụ ọrụ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, Handcrafted, UV 400 Nchedo, Mpempe Egwu Na-adịghị Eche Echiche, Oghere 3 Cat, Artisan Edere, Eco-Friendly
Limited Edition Black na Uhie Ugogbe uhie Bamiri.
N'ime ụlọ nsọ / ogwe aka aka nri nwere "ọnya ojii na ọbara ọbara" nke nwere akara ngosi anyị na nka a kpụrụ akpụ na mpụga. N'ezie a masterpiece.
Gụnyere: ugogbe anya anwụ, obere microfiber obere akpa, akwa nhicha Microfiber na-akwụghị ụgwọ, eriri ugogbe ugogbe anya nke efu, kaadị nnwale na-enweghị atụ!
Sizing: Frame Width: 5.7 inches - Fraim Elu: 1.9 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.9 sentimita.
Ejiri aka: Akara ugogbe anya maka anwụ Engleberts ọ bụla bụ nke ejiri osisi adịchaghị mma wee rụọ ya aka. N'ihi ọdịiche dị na ọka osisi, ọ dịghị mmadụ abụọ ga-adị nhata. Kedu ka nke ahụ si dị mma?
100% Akpadoro Afọ Ojuju: Obi siri anyị ike na anyị nwere ngwaahịa sunglass. Ọ bụrụ n’ịchọghị nke gị, weghachi ha maka nkwụghachi zuru ezu.
Ugogbe anya maka anwụ na-egosipụta anyanwụ ma na-egosipụtakwa àgwà gị. Ndị Nlekọta tọrọ ntọala maka otu ihe: iji mee ka ị dị ka nke mbụ, nke pụrụ iche, rad, nke a ma ama na nke ọma.
Anyị ga-ebuputa ụzọ ọ bụla nwere obere microfiber obere akpa maka obere, akwa microfiber na-ehicha akwa iji mee ka ị na-ele anya dapper, Free sunglass straps ka ị ghara idafu akụ mba ndị a. Heck, anyị ga-atụba kaadị nnwale Free Polarization ka ị wee mara na ị na-enweta ezigbo ahịa. Obere ihe ndi ozo etinyere na nke obula nke na ekewapu gi na anyi na ndi ozo.
Ugogbe anya anwụ Rosewood, Polarized, HandCrafted, UV 400 Nchedo, Anti-Reflective Cat 3 Anya m, Artisan kanye, Eco-Enyi na Enyi.
Sizing: Frame Width: 5.75 inches - Fraim Elu: 1.9 sentimita asatọ - Llọ Nsọ Ogologo: 5.75 sentimita.
9 Layer Cat 3 Anya m: Anya m Cat 3 bụ elele ka